UMseshi omkhulu we-UKZN’s Catalysis and Peptide Research Unit, uSolwazi Gert Kruge; Umqondisi e-K-RITH, uSolwazi William Bishai, Solwazi Perumal Yogeeswari kanye no Solwazi Dorai Sriram kanye noSosayensi wase K-RITH uSolwazi Jacques Grosset.
Izazimfundo ezimbili zase Ndiya kamuva nje zethule imiphumela yocwaningo oluqhubekayo ngokuqamba ingxube kanye nokuhlola izidakamizwa zesifo sofuba (i-TB) kanye nemishanguzo yesandulela ngculazi (i-HIV) kwiqeqebana lososayensi abebeyingxenye lwezifundo eziqhubekayo zocwaningo e-K-RITH.
Izazimfundo ezingo Solwazi Dorai Sriram kanye noSolwazi Perumal ongu Solwazi ngobulungu eBirla Institute of Technology and Science, okungesinye sezikhungo esihamba phambili kuma Nyuvesi afundisa ngamakhono kwelase Ndiya.
Ukuvakasha kwabo e-UKZN bekuyingxenye yobudlelwano obukhona phakathi kwelase-Ndiya-Brazili-Ningizimu Afrika obenziwe ngempumelelo ngoxhaso lwe-National Research Foundation ngo-2011, ukuxhasa lobu budlelwano obuphakathi kwabacwaningi base Brazili kanye ne-UKZN phecelezi – Catalysis and Peptide Research (http://cpru.ukzn.ac.za/) kumsebenzi wokuqamba izidakamizwa zesandulela ngculazi.
USriram kanye noYogeeswari bathe isandulela ngculazi akusiso isifo esisha futhi nabacwaningi sebenze inqubekela phambili ekunqandeni izinga eliphezulu lokufa kweziguli ezisulelekile ngokuthi balaphe ngemishanguzo umhlaba-jikelele. Nakuba, emazweni athuthukayo esiwabiza phecelezi- Third world countries, ahaqwe isifo sofuba kanye nesandulela ngculazi kanye nezinye izifo ezingosomathuba ezigulini, kube khona isidingo esiphuthumayo sokuthuthukisa ngendlela ekhonekayo imithi ye-TB.
Bathi, isibalo sabantu abahaqwe isandulela ngculazi abaya kwagoqa nyawo ngaso isifo sofuba sibathusile, emazweni lapho indlala ibhoke khona kanye nokubhebhetheka kwesandulela ngculazi, bekunzima kakhulu ukukwazi ukuqhubezela phambili imishanguzo kanye naleyo enamandla yesifo sofuba.
Oka-Sriram uthe, ucwaningo lwakhe beluphathelene nesifo sofuba esisasalele – isimo lapho umuntu esuleleke ngofuba esithi phecelezi, Mycobacterium tuberculosis, kodwa igciwane le-TB lingakabonakali okwamanje. Uthe ukuqonda ukucozululwa kwamakhemikhali kanye nokubaluleka kwezidakamizwa kwiziguli ezisulelekile kumele kuqashelwe ngeso lokhozi, ngaphezu kwalokho, ukubaluleka kokuthathwa kwemishanguzo ye-TB uma ithathwa kanye nama-antiretroviral, noma vice-vesa.
Isethulo sika-Sriram besigxile kumasu okuthuthukisa lokhu esithi phecelezi i-novel anti-tubercular compounds kanti esika Yogeeswari simayelana nesakhiwo semishanguzo, indlela esingabonakala ngayo kwizinhlayiyana ezahlukene zalokhu okubizwa phelecezi- HIV enzymes.